प्रधानमन्त्री ओली लाई कोष्टारीकामा डाक्टर बनाईदैं ! कस्ले र कीन बनाए डाक्टर ? – Pradeshi Online
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले कोस्टारिका पुगेका छन् । उनी नपाली प्रतिनिधि मंण्डलको नेतृत्व गर्दै दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोस्टारिका पुगेका हुन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७३ औँ अधिवेशनमा भाग लिएर उनी कोस्टारिका गएका हुन् ।
कोस्टारिकाका राष्ट्रपति कार्लोस अल्भाराडो क्वेसाडाको निमन्त्रणामा कोस्टारिकाको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओली कोस्टारिका पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यहाँ कोस्टारिकाकी उपप्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्न उपराष्ट्रपती इप्सी क्याम्वेल बार विमानस्थल पुगेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोस्टारिकामा रहँदा शान्ति विश्वविद्यालय (युनिभर्सिटी फर पिस) मा प्रवचन दिनेछन् । प्रवचनपछि उनलाई मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरिने तयारी भइरहेको ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोस्टारिकाको सान जोसमा कोस्टारिकाका राष्ट्रपति कार्लोस अल्भाराडो क्वेसाडासँग दुई पक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् ।